Entertainment « BadalNepal
दोस्रो सन्तानकी आमा बनिन् नायिका समिरा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री समिरा रेड्डीले फेरी पनि छोरी जन्माएकी छिन् । उनले उक्त छोरीको
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री समिरा रेड्डीले फेरी पनि छोरी जन्माएकी छिन् । उनले उक्त छोरीको तस्विर सामाजिक संजालमा शेयर गरकी छिन् । सरिाले छोरीको हात समाएको तस्विर इंस्टाग्राममा शेयर गरेर आफु धेरै खुशि भएको बताएकी छिन् । उनले बेला बेलामा आफ्ना तस्विर शेयर गरी रहेकी हुन्छिन् ।
उनका एक छोरा हंस पनि रहेका छन् । जन्म १४ दिसम्बर, १९८ मा भएको हो । उनि सधै आफ्ना फोटो शुटका कारण चर्चामा आउने गर्दछिन् । केहि समय पहिला पनि समिराले आफ्ना प्रेमि अन्डर वाटर संग फोटो शुट गराएकी थिइनन् । उनले इंस्टाग्राममा भिडियो फोटो शुट गरेकै हुन्छिन् । उनको विवाह २०१४ मा अक्षय वर्देसँग भएको थियो । यि दुबै जना २ वर्षसम्म प्रेममा रहेर प्रेमलाई विवाहमा परीणत गरेका हुन् । रीति रिवाजमा साथ यि दुबैको विवाह भएको हो ।
दीपिका पादुकोणका बोल्ड फोटोशूट भाईरल
एजेन्सी बलिउडको अत्यन्तै रुचाइएको जोडी हो रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण । उनीहरुले लामो प्रेम
एजेन्सी बलिउडको अत्यन्तै रुचाइएको जोडी हो रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण । उनीहरुले लामो प्रेम सम्बन्ध पछि मात्र बिबाह बन्धनमा बाधिएका हुन् ।
बिबाह पछि पनि उनीहरुले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।रणवीरले दीपिकालाई असाध्धै माया गर्दछन् । उनले हालै हट अबतारमा फोटोशूट गराएकी छिन् । यो फोटोशूट दीपिकाले चर्चित ज्वेलरी ब्राण्ड तनिष्क ज्वेलरीका लागि गराएकी हुन् । उनका यि फोटोले सामाजिक संजाल तताएको छ ।
उनका फ्याले धेरै मन पराएका छन् । उनका फरक फरक लुक्सका तस्विरहरु सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएका छन् । फोटोमा दीपिका निकै सुन्दरी देखिएकी छिन् । र उनि फोटो सुटमा फरक फरक लुकमा देखा परेकी छिन् ।
ऐश्वर्यकी चर्चित नायिका दिपिका प्रसाइका हट तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल हेर्नुहोस् तस्विरहरु
काठमाडौ । फिल्म ऐश्वर्यबाट डेब्यु गरेकी चर्चित नायिका हुन् दिपिका प्रसाई । उनि अहिले वैवाहिक
काठमाडौ । फिल्म ऐश्वर्यबाट डेब्यु गरेकी चर्चित नायिका हुन् दिपिका प्रसाई । उनि अहिले वैवाहिक जीवनमा रमाइरहेकी छिन । प्रसाई चर्चित निर्देशक दिवाकर भट्टराईसँग प्रेम विवाह गरेकी हुन् । अहिले दिपिका आफ्नो वैवाहिक जीवनमा रमाएकी छिन् । विवाह पछि दिपिका फिल्म तिर त्यत्ति धेरै सक्रिय पनि छैनन् ।
छक्का पन्जा ३ बाट उनले दर्शकको माया पाएकी हुन् । फिल्म क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक संजालमा पनि उनी उतिकै सक्रिय रहेकी हुन्छिन् । उनले बेलाबेलामा आफ्ना हट तस्विर शेयर गरेकी हुन्छिन् । हालै उनले हट तस्विर शेयर गरेकी छिन् । हेर्नुहोस दिपिकाका यी लोभ लाग्ने मेकअफमा सजिएका तस्विरहरु
बलिउड चर्चित नायिका करिना कपुरका यस्ता तस्विर भए सामाजिक संजालमा भाइरल,हेर्नुहोस् फोटो
एजेन्सी । फिल्म रिफ्युज़ी बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी चर्चित अभिनेत्री करीना कपुर एक सर्वश्रेष्ठ नायिका
एजेन्सी । फिल्म रिफ्युज़ी बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी चर्चित अभिनेत्री करीना कपुर एक सर्वश्रेष्ठ नायिका हुन् । उनले रिफ्युज़ी बाट बेस्ट डेब्यु फिल्मकी नायिकाबाट अवाड जितेकी थिइन् ।
उनले दर्जनौ फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । करीना फिल्मका अवला सामाजिक संजालमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । बलिउडमा करिना कपुरको फिगरको अत्यन्तै चर्चा हुने गर्छ । बरिना बाल्य कालमा पनि उत्तिकै सुन्दर क्युट थिइन्। उनी बलिउडकी चर्चित नायिका करिष्मा कपुरकी बहिनी हु्न ।
अहिले पनि एक सन्तानकी आमा भइसक्दा पनि उनको सुन्दरतामा कुनै कमी आएको छैन् । सामाजिक संजालमा नायिका करिना कपुरका तस्विर बेला बेला भाइरल भइरहन्छन उनका एक छोरा तैमुर खान समेत रहेका छन् । उनि सैफ अलिखानकी दोस्रि पत्नि रहेकी छिन् । बेला बेलामा आफ्ना तस्विर शेयर गर्ने करीनाले हालै पनि एक तस्विर सामाजिक संजालमा शेयर गरेकी छिन् । जुन उनका तस्विरले बलिउड तताएको छ ।
प्रहरी परिसरमा पति छवि ओझा विरुद्ध उजुरी दिइन् नायिका शिल्पा पोखरेलले
काठमाडौँ । पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका शिल्पा पोखरेलले पति छविराज ओझा विरूद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा
काठमाडौँ । पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका शिल्पा पोखरेलले पति छविराज ओझा विरूद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा उजुरी दिएकी छन् ।
पोखरेलले ३ दिन अगाडी ओझा विरूद्ध घरेलु हिंसाको उजुरी बताइएको छ । बुधबार दिउँसो उजुरीको सम्बन्धमा छलफलका लागी ओझा र पोखरेल दुवैलाई परिसर बोलाइएको बताइएको छ ।
चलचित्र ‘लज्जा’बाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी शिल्पा ले छविले नै निर्माण गरेका ‘मंगलम’ र ‘हबल्दार सुन्तली’ मा पनि काम गरिसकेकी छन् ।
अभिनेत्री रेखा थापासँग डिभोर्स पछि छवि र शिल्पा नजिक भएका उनीहरुले २०७३ साल मै गुपचुप बिबाह गरेका थिए । पछिल्लो समय यी दुईको सम्बन्धमा खटपट आएको बताइएको छ ।
सन्तान जन्मिएपछि टुट्यो ‘शक्ति’की नायिका काम्या पन्जाबीको सम्बन्ध, अहिले एक्लै पाल्दैछिन् छोरी
एजेन्सी । चर्चित भारतिय टिभी सिरियल शक्तिकी चर्चित नायिका हुन् काम्या पन्जाबी उनले सन् २०१३
एजेन्सी । चर्चित भारतिय टिभी सिरियल शक्तिकी चर्चित नायिका हुन् काम्या पन्जाबी उनले सन् २०१३ मा बंटी नेगीसँग विवाह वन्धनमा बाधिएकी हुन् । उनले शक्ति सिरियलबाटनै धेरै फ्यान कमाउन सफल भएकी हुन् ।
उनले धारावाहिक ‘बनू मई तेरी दुल्हनू में’ नकारात्मक बुहारीको भुमिकामा देखा परेकी थिइन् । त्यसै अभिनयबाट सर्वश्रेष्ठ अभिनत्रीको पुरस्कार समेत जीतेकी थिइनन् । र अहिले उनि छोरी आराको पालन(पोषण गरीरहेकी छिन् ।
चर्चित टिभी सिरियल ‘ससुराल सिमरकी’ गृहिणी बुहारी दिपिका कक्कड रियलमा छन् यति धेरै हट
एजेन्सी । भारतिय चर्चित टिभी सिरियल ससुराल सिमर का’की चर्चित नायिका हुन् दिपिका कक्कड ।
एजेन्सी । भारतिय चर्चित टिभी सिरियल ससुराल सिमर का’की चर्चित नायिका हुन् दिपिका कक्कड । उनि ससुराल सिमर काबाटनै निकै चर्चामा आएकी हुन् । उनि एक असल गृहिणी र असल बुहारीको भुमिका निभाएकी छिन् उनको त्यो अभिनयलाई अत्याधिक रुचाइएको छ । उनले ससुराल सिमरबाट धेरै फ्यान कमाएकी छिन् ।
उनि टिभी सिरियलमा निकै नरम स्वभावकी र असल बुहारीको भसमिका निभाएकी हुन्छिन् । दिपिकालेटिभी सिरियल देवी’ बाट आफ्नो अभिनय करियर शुरु गरेकी हुन् ।
उनले आफ्नो एक सहकर्मी रौनक सम्सोन संग विवाह वन्धनमा वाधिएकी हुन् । उनि अभिनयमा भन्दा पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । शोएब इब्राहि‍म सिववाह भएपछाडि उनले आफ ्नो धर्म समेत परिवर्तन गरीन र इस्लामी राखिन र उनको नाम दिपिकाबाट फैजा बन्न बन्या कक्कड बिग बोसको कन्टेस्टेन्टमा पनि चर्चामा आएकी थिइनन् ।
उनलाई एक महगि नायिका भनेर ुमेत चिनिने गरिन्छ । बेलाबेलामा हट तस्विरका कारण निकै चर्चामा आउने गर्दछिन् । र आफ्ना बोल्ड तस्विर सामाजिक संजालमा शेयर गरेकै हुन्छिन् हालै पनि दिपिका कक्कडले हट अबतारका तस्विरहरु शेयर गरेकी
शाहिद कपुरले कमाइमा उछिने, सलमानलाई मात्र होइन शाहरुखलाई पनि
एजेन्सी । शाहिद कपुर अभिनित फिल्म ‘कबिर सिंहले बलिउडमा राम्रो कमाइ गर्यो । फिल्ममा
एजेन्सी । शाहिद कपुर अभिनित फिल्म ‘कबिर सिंहले बलिउडमा राम्रो कमाइ गर्यो । फिल्ममा उनको भुमिकालाई अत्यन्तै मन पराइयो । कबिर सिंहले १८ दिनमा २३९।९७ करोडको व्यापार गर्न सफल भयो ।
जसले सन् २०१३ मा प्रदर्शनमा आएको शाहरुख खानको चलचित्र ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ र २०१४ मा प्रदर्शनमा आएको सलमान खानको चलचित्र ‘किक’ को व्यापारलाई उछिनेको छ। लमानको किकले लाइफटाइम २३१।८५ कमाई गरेको थियो भने शाहरुखको चेन्नई एक्सप्रेसले २२७।१३ करोडको व्यापार गरेको थियो।
फिल्ममा शाहिदका अलवा कियारा आडवाणिको मुख्य अभिनय रहेको छ । फिल्ममा शाहिदको जड्याहा प्रेमीको भुमिकालाई अत्यन्तै मन पराइएको छ ।‘कबिर सिंह’ शाहिद कपूरको करियरको सबैभन्दा सफल फिल्मसमेत बनेको छ। कबिर सिंह तेलगु चलचित्र अर्जुन रेड्डीको रिमेक हो। जसको निर्देशन सन्दीप भांगाले गरेका हुन्।
चर्चित सिरियल ‘नागिनकी’ नायिका मौनि रायका बाल्यकालका तस्विर बने भाइल
एजेन्सी । बलिउड चर्चित नायिका हुन् मौनी रोय । भारतिय टेलिभिजन नागिनबाट निकै चर्चामा आएकी
एजेन्सी । बलिउड चर्चित नायिका हुन् मौनी रोय । भारतिय टेलिभिजन नागिनबाट निकै चर्चामा आएकी मौनि फिल्म क्षेत्रमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । उनि माथि बेलाबेलामा सबिभिन्न किसिमका आरोपहरु आउने गर्दछन् । मौनी रोयको लुक्समाथि ट्रोल हुने पनि गर्दछ । नागिनमा उनको त्यो अभिनयलाई अत्याधिक रुचाइएको छ ।
टिभी सिरियल नागिनबाटनै धेरै फ्यान कमाउन सफल भएकी हुन् । बेलाबेलामा उनका तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल हुने गर्दछन् । उनि एक कार्यक्रममा पुग्दा पनि उनको लुक्ससका कारण ट्रोल बनेकी थिइन् । उनले आफु सुन्दर हुनका लागि पनि ओठ सर्जरी गरेकी थिइन् ।
ओठको कारण मौनी ट्रोलको सिकार हुन पुगिन उनि सिरियलमा मात्र नभई फिल्ममा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । उनि अहिले मात्र होइन बाल्यकालमा पनि उतिकै सुन्दर रहेकी थिइन् । हालै मौनिले बाल्यकालका तस्विर हेयर गरेकी छिन् ।
एक चर्चित अभिनेताकी छोरीको करियर अगाडि बढाउने जिम्मा लिए सलमान खानले
एजेन्सी । फिल्म हिरो’ बाट डेब्यू बलिउडमा डेब्यु गरेकी चर्चित अभिनेत्री अथियाको करियर अगाडि बढाउने
एजेन्सी । फिल्म हिरो’ बाट डेब्यू बलिउडमा डेब्यु गरेकी चर्चित अभिनेत्री अथियाको करियर अगाडि बढाउने जिम्मा सलमान खानले लिएका छन् । उनि एक अभिनेता सुनिल शेट्टीकी छोरी समेत रहेकी छिन् । खानले उनैको लागि फिल्मको खोजि कार्य गरीरहेका छन् । फिल्म हिरोबाटनै आफ्नो करियर अगाडि बढाएकी अथियाले खासै सफलता पाउन सकिनन् ।
फिल्मबाट सफतला हात नपारेका कारण सलमानले उनका लागि सुपरहिट फिल्मको खोजिमा रहेको समाचारमा जनाइएको छ उनले अथियालाई मात्र नभई अर्का नायक सुरज पञ्चोलीका लागि पनि फिल्मको खोजिमा रहेका छन् । सुरज आदित्य पञ्चोलीका छोरासमेत रहेका छन् ।
खानले आफ्नो बाचा पुरा गर्नका लागि यी दुबैका लागि फिल्मको खोजि गरीरहेको बताउछन् । त्यसैले सलमान अथिया र सुरजको लागि उपयुक्त प्रोजेक्टको खोजिमा जुटिरहेका छन् । सलमानले बलिउडमा यस अघि धेरै नायिकाको करियर जोगाइदिएका छन् । सलमान अभिनित पछिल्लो फिल्म भारतले बलिउडमा राम्रो व्यापार गर्न सफल भयो ।
पत्नि गिन्नीका कारण क्यानडा जाँदै कपिल शर्मा, के अब शो मा फर्किदैनन् त ?
एजेन्सी । भारतीय बहुचर्चित हाँस्य अभिनेता हुन् कपिल शर्मा । ‘द कपिल शर्मा शो’बाट विश्वभर
एजेन्सी । भारतीय बहुचर्चित हाँस्य अभिनेता हुन् कपिल शर्मा । ‘द कपिल शर्मा शो’बाट विश्वभर ख्याती कमाएका यि हाँस्य अभिनेताले फेरी शो छाड्नुको कारण भने उनको ब्यक्तिगत हो ।
उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ गर्भवती भएसँगै उनले कामबाट बिश्राम मात्रै लिन खाजेको बताइएको छ । सोनी टिभीमा यसै वर्ष सुरु भएको द कपिल शर्मा शोको तेस्रो सिजन राम्रो चलीरहेका बेला उनी बाबु बन्न लागेसँगै शोबाट ब्रेक लिन लागेका हुन् ।
यही बीचमा कपिल बेबीमुनमा जाने तयारीमा छन् । उनी बेबीमुनका लागि क्यानडा जाँदैछन् । गएको वर्षको डिसेम्बरमा कपिलले गिन्नीसँग बिहे गरेका थिए ।
योजना र बिरेन्द्रको ‘आउन माया’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गायिका तथा मिडियाकर्मी योजना पुरी र बिरेन्द्र श्रेष्ठको ‘आउन माया’ गीतको भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । गायिका तथा मिडियाकर्मी योजना पुरी र बिरेन्द्र श्रेष्ठको ‘आउन माया’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पुष्पा खड्का र सृष्टि खड्कालाई फिचर्ड गरीएको उक्त गीतलाई दिपक शर्माले संगीत गरेका हुन् । गीतमा सुरेन्द्र बस्यालको कोरियोग्राफि रहेको छ ।
गीतलाई निशन कशयापले निर्देशन गरेका हुन् । गीतमा राजकुमारीको मन भित्रको भित्रि ईछालाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । जसमा दरबारको कथालाई देखाईएको छ । गीतमा राजकुमारी सृष्टिको मायामा पुष्पाको एकोहोरो प्रेम देखाउँन खोजिएको छ ।
सुटिंगमै करिनालाई अजय देवगनले रिसाहा भनेर हिँडेपछि
एजेन्सी । फिल्म रिफ्यूजी मार्फत बलिउडमा डेब्यु गरेकी बलिउडकी चर्चित नायिका करीना कपुर पछिल्लो समय
एजेन्सी । फिल्म रिफ्यूजी मार्फत बलिउडमा डेब्यु गरेकी बलिउडकी चर्चित नायिका करीना कपुर पछिल्लो समय निकै ब्यस्त छिन् । छोरा तैमुरलाई जन्म दिएसँगै केही समय ब्रेक लिएकी यि सुन्दरीलाई अहिले भने भ्याई नभ्याई छ । करीनालाई भारतीय सिनेमा जगतकी बहुप्रसिद्ध अभिनेत्री भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । चर्चित निर्देशक तथा चलचित्र निर्माता प्रकाश झाको फिल्म ‘सत्याग्रह’ को रसके भरे तोरे नैन गितमा करीनाले अभिनेता अजय देवगनलाई कि(स गर्न सिधैं अस्वीकार गरेकी थिईन ।
उनले अजय देवगनलाई कि(स गर्न अस्वीकार गरेपछाडि करिना ट्रोलको सिकार बन्न पुगिन । त्यसैगरी सन् २०१३ मा रिलिज भएको फिल्म ‘सत्याग्रह’ को गीतमा इन्टिमेट सिन पनि किसको रोलमा उनले ठाडै अस्विकार गरेकी थिईन् । निर्देशकको कुरै नसुनी उनि झम्मक रिसाएर हिँडेकी थिइन् । त्यसपछि अजयले सन्की छिन् किन बित्थैमा रिसाउँछिन् भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
चर्चित टिभी सिरियल कुमकुम भाग्यकी सँस्कारी बुहारी नायिका प्रज्ञाको रियल फोटो यति हट
एजेन्सी । भारतिय टेलिसियिलमा अभिनय गरेर चर्चामा आएकी नायिका हुन सृति झा । उनले टेलसिरियल
एजेन्सी । भारतिय टेलिसियिलमा अभिनय गरेर चर्चामा आएकी नायिका हुन सृति झा । उनले टेलसिरियल धूम मचाओ, धूमबाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी हुन । जसमा उनले मालिनी शर्माको भुमिका निभाएकी थिइन् । उनको अभिनयलाई रुचाइएको थियो ।
यो बाहेक उनले कुमकुा भाग्य, कुन्डली भाग्य , बालिका वधू , दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भवमा अभिनय गरेकी छिन् । पछिल्लो समय उनले सिरियल कुमकुम भाग्यमा अभिकी पत्नि प्रज्ञाको भुमिका निभाएकी छन् । उनको भुमिकालाई अत्यन्तै मन पराइएको छ ।
सिरियलमा सामान्य र लामो कुर्ता अनि साडी लगाएर अभिनय गरेकी उनी पर्दा बाहिर भने निकै हट छन् । हेर्नुहोस उनका हट तस्विरहरु
कुनै समय बलिउडमा एकछत्र राज गरेकी रानी मुखर्जीका हेर्नुहोस् हट तस्विरहरु
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित नायिका रानी मुखर्जी कुनै बेला सर्वाधिक सुन्दरी नायिका हुन् । सन्
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित नायिका रानी मुखर्जी कुनै बेला सर्वाधिक सुन्दरी नायिका हुन् । सन् २०१४ मा बनेको चलचित्र मर्दानी’बाट उनि निकै चर्चामा आएकी हुन् ।
र पहिलो फिल्मबाटनै रानिले धेरै फ्यान कमाइकी थिइन् । वैवाहिक जिवनमा बाँधिएकी उनि अहिले मात्र होइन बाल्यकालमा पनि उतिकै सुन्दर रहेकी थिइन । रानी फिल्मका अवला सामाजिक संजालमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । उनले बेलाबेलामा आफ्ना तस्विर शेयर गरेकै हुन्छिन् ।
उनले फिल्मबाटनै धेरै दर्शकको मन जितिरहेकी हसुन्छिन बेलाबेमा दर्शकहरुलाई बोल्ड तस्विर दिएकै हसन्छिन् । हालै पनि रानीले यस्ता तस्विर शेयर गरेकी छिन् हेर्नुहोस् उनका यि तस्विरहरु
अन्तरगं सिन दिन कुनै अफ्ठ्यारो नमान्ने चर्चित बलिउड नायिका विपशा बसु
एजेन्सी । फिल्म अजनबीबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी नायिका हुन विपशा बसु । उनको जन्म जनवरी
एजेन्सी । फिल्म अजनबीबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी नायिका हुन विपशा बसु । उनको जन्म जनवरी ज्ञढठड नई दिल्लीमा भएको हो । उनि हिन्दि फिल्मका अवला बंगला फिल्ममा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् ।
उनका एक दिदि र एक बहिनि रहेका छन् । उनको पढ़ाई कोलकाता शुरु गरेकी हुन् । विपशाले फिल्म अजनबी बाट आफ्नो करीयर शुरु गरेकी हुन् । फिल्मबाट नै उनले धेरै फ्यान कमाउन सफल भएकी हुन् । बिपासाले दर्जनौ फिल्ममा अभिनय गरी सकेकी छिन् । बंगाली ब्यूटी भनेर चिनिने बिपाशा बलिउडकै बोल्ड नायिकामा पर्ने गर्छिन्।
तर उनि हरेक फिल्ममा सजिलै सँग किस शिन दिन तयार रहेकी हुन्छिन् । यसो फिल्ममा उनको अभिनय पनि अब्बल रहेने गर्छ । बलिउडमा उनले धेरै सफल फिल्ममा अभिनय गरेकी छन् ।
सलमान खानसँग बिहे गर्न चाहने को हुन यि बलिउड सुन्दरी ?
एजेन्सी । चर्चित बलिउड अभिनेता हुन् सलमान खान । उनि सँग बिहे गर्ने भनेपछि जो
एजेन्सी । चर्चित बलिउड अभिनेता हुन् सलमान खान । उनि सँग बिहे गर्ने भनेपछि जो कोही पानि भुतुक्कै हुन्छन् । तर उनि उमेरले पचपन्न भएपनि झट हेर्दा भर्खरका देखिन्छन् । उनलाइ चाहाने र उनी प्रति फिदा युवतिहरु बलिउडमा धेरै छन् । जो कोहीले पनि मिडियामै आएर सलमान खानसँग बिहे गर्ने चाहान्छु भन्ने आँट गर्देनन् ।
तर सुन्दरी नायिका उर्वशी रातौलले भने आफुले सलमान खानसँग बिहे गर्न चाहेको बताएकी छन् ।उनले एक अन्र्तवार्तामा आफुले सलमान खानसँग बिहे गर्न चाहेको र यदि बिहे गर्न पाएमा आफु अत्यन्तै भाग्यमानी हुने बताएकी छन् । बलिउडमा उर्वशीको रुपको चर्चा चौतर्फी हुने गर्छ ।
पति निकले नायिका प्रियंका चापेडाको बोल्ड तस्बीर खिच्दा, तस्बीर बन्यो भाइरल
एजेन्सी । बलिउड तथा हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनास हाल छुट्टी
एजेन्सी । बलिउड तथा हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनास हाल छुट्टी मनाइरहेका छन्। छुट्टीमा उनीहरुले मस्ती गरिरहेका छन् । केही समय अगाडि पेरिस भ्रमणमा रहेका उनीहरु हाल इटालीमा रमाइरहेका छन् ।
उनीहरु रमाइरहेका तस्विरहरु बेला बेला बाहिर आइरहन्छन् ।उनीहरुबीचको गहिरो प्रेम उनीहरुका तस्विरबाट नै छरलंग हुन्छ । हालै निक जोनासले श्रीमती प्रियंकासँग नाचेको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए।
इन्स्टाग्राममा उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यो भाइरल बनेको छ। प्रियंका चोपडाले आफ्ना पति निकले खिचेका बोल्ड तस्बिरहरु सार्वजनिक गरेकी छन् । उक्त तस्विरमा उनी निकै बोल्ड देखिएकी छन् ।
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फोटोहरु सार्वजनिक गरिएका छन्। प्रियंकाले उक्त फोटोहरु श्रीमान निलके खिचेको बताएकी छन् । पछिल्लो समय यो जोडी विश्वकै चर्चित जोडीमा पर्छ ।
एजेन्सी । बलिउडका धेरैजसो अभिनेत्री विवाह हुनु पुर्वनै गर्भवती हुने गर्दछन् । तर त्यो उनिहरुलाइ
एजेन्सी । बलिउडका धेरैजसो अभिनेत्री विवाह हुनु पुर्वनै गर्भवती हुने गर्दछन् । तर त्यो उनिहरुलाइ सामान्य नै लाग्ने गर्दछ सेलिना जेटली पनि विवाह हुन् अगाडि नै गर्भवती भएकी थिइन् उनि बोइफ्रेन्ड पिटर हगसँगको सम्बन्धबाट नै गर्भवती भएकी हुन् । उनि गर्भवती भएपछाडि मात्र विवाह वन्धनमा बाधिएका हुन् ।
विवह गरेको केहि महिना पछाडि पिटर हग र सेलिना जेटली आमा बाबु भएका हुन् । उनले जुम्ल्याहा सन्तानको समेत जन्म दिएकी थिइन्। अहिले उनिहरु आफ्नो लाइफ जुम्ल्याहा बच्चाका साथ हासि खुशी बिताएका छन् ।
चर्चित टिभी सिरियल छोटी बहूकी रुबिना दिलैक अहिले सम्मकै हट अबतारमा (हेर्नुहोस् तस्विरहरु)
एजेन्सी-भारतिय चर्चित टिभी सिरियल शक्तिकी चर्चित नायिका रुबिना दिलैक यतिबेला हट अबतारमा देखा परेकी छन्
यति बेला फेरी उनी आफ्नो हट तस्विर इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी छिन् । शक्ति, एक अहसास, र छोटी बहू सीरियलबाट घर-घरमा चर्चित बनेकी रुबिना अभिनव भन्दा पहिले टिभी एक्टर अविनाश सचदेवसँग करिब ४ वर्षसम्म प्रेम सम्बन्धमा रहेकी थिइन् ।
सलमान खानको विवाह बारे यस्तो खुलासा गरिन् शिल्पाले
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खानको उमेर आधा शताब्दी पार गरिसकेका छन् । तर, उनी
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खानको उमेर आधा शताब्दी पार गरिसकेका छन् । तर, उनी अविवाहित रहेका छन् । उनको उमेर पचप्न वर्ष पुगेको छ । अविवाहित भए पनि उनी सधैँ प्रेमसम्बन्धका कारण चर्चामा आइरहन्छन् । उनको नाम थुप्रै अभिनेत्रीसँग जोडिएको छ ।
९० को दशकमा सलमान र शिल्पाको अफेयरले बजार पिटेको थियो । तर, दुवैले सार्वजनिक रूपमा यसलाई स्वीकार गरेनन् । सम्बन्ध कुनै पनि मोडमा पुगेन र शिल्पाले व्यापारी राज कुन्द्रासँग विवाह गरिन् । विवाह भएकोकेहि वर्षपछि भने शिल्पाले सलमानसँगको सम्बन्धलाई लिएर मुख खोलेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘कहिलेकाहीँ सलमान मेरो घरमा आएर वास बस्थे । कहिलेकाहीँ सलमानले मेरो बुबासँग रक्सी पनि पिउँथे ।’
उनले अझै थपेकी छिन्, ‘मलाई याद छ, बुबा बितेपछि सलमान घर आएर सीधै टेबलनजिक गए । जुन टेबलमा सलमान र बुबाले पिउँथे । पुरानो दिन याद गरेर उनी निकै रोएका थिए ।’ सलमान र शिल्पा दश, शादी करके फस गया यार, फिर मिलेंगे, गर्वलगायत फिल्ममा सँगै देखिएका थिए ।
किन सलमानको मजाक उडाउँदै भारतबारे यस्तो कडा प्रतिक्रिया दिइन् प्रियंकाले
एजेन्सी । सलमान खान र कट्रिना कैफ अभिनित फिल्म भारतले अहिले भारतमा मात्र नभएर विश्वभर नै हंगमा मच्चउन सफल भएको छ । रिलिज भएको केही दिनमा नै २ सय करोड कमाइ रहेको फिल्मले राम्रो ब्यापार गरिरहेका बेला चर्चित भारतीय नायिका तथा अमेरिकन बुहारी प्रियंका चोपडाले सलमान खान र चलचित्र भारतको खिल्ली उडाएकी छिन् ।
सुरुमा सलमानले प्रियंकालाई अवसर दिएको तर पछि क्याट्रिनाले अभिनय गरेको भन्ने समाचारहरु भाइरल बनिरहेका बेला प्रिय।काले आँफुले उक्त फिल्ममाकाम नर्गनुको पछाडीको कारण बताएकी छिन् ।
प्रियंका चोपडाले सलमानको फिल्म भारत छोड्नुको कारण बताउँदै यसलाई नाच्ने–गाउने फिल्मको संज्ञा दिँदै भनिन् , ‘सबैले मलाई मेरो निर्णयबारे सोध्थे, आखिर किन यस्तो गरेको भन्थे । मलाई नाच्ने गाउने, तडकभडकयुक्त फिल्म किन छोडेँ भनेर पनि सोधिन्थ्यो । कतिले मलाई म किन १८ वर्षको बच्चाको आमाको भूमिका निभाउन राजी भएँ भनेर पनि सोध्थे ।
र आँफुले भारत छाडेर द स्काई इज पिंक नामक फिल्म रोजेको प्रतिक्रिया दिइन् । प्रियंका चोपडाले सलमानको भारतबारे यस्तो टिप्पणी गरेसँगै अब सलमानले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
चर्चीत गायक नविन रावलको ‘फिलिङ ह्यापि’सार्बजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । चर्चीत गायक नविन रावलको फरक शैलीको गीत ‘फिलिङ ह्यापि’ को भिडियो सार्वजनिक भएको
काठमाडौँ । चर्चीत गायक नविन रावलको फरक शैलीको गीत ‘फिलिङ ह्यापि’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । विशेष गरी आधुनिक गीतमा आफ्नै शैलीका कारण लोकप्रिय बनेका गायक रावलले आधुनिक र र्‍याप मिसाउदै ‘फिलिङ ह्यापि’ को गीत बजारमा लिएर आएका हुन्।
गीतमा शब्द मिलन विष्टको हो भने लय र संगीत रावलको नै रहेको छ। गीतको भिडियोलाई कोरियोग्राफी राम घोले र सुविन चौहानले गरेका हुन् । कलाकार आश्मा विश्वोकर्मा र सरोज अधिकारीको नृत्य तथा डान्स गरेको भिडियो लाक्पा डि लामाले सम्पादन गरेका हुन् ।केहि समय ‘चिया भन्दा कित्तली गरम’ गीत लिएर आएका गायक नविन रावलको ‘ओइ तिम्रो छ कि छैन कोहि रु, ‘दिलको भितामा’ जस्ता सफल गीतहरु बजारमा लिएर आईसकेका छन् ।
“प्रेम गीत ३” मा प्रेम र गीत का अलावा को को मुख्य भुमिकामा आवद्ध भए ।( फोटो सहित )
फ्लोरमा ननिस्किँदै फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ को चर्चा हेर्दा यस्तो लाग्छ, यसले बक्सअफिसमा आँधी ल्याउँदैछ ।
फ्लोरमा ननिस्किँदै फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ को चर्चा हेर्दा यस्तो लाग्छ, यसले बक्सअफिसमा आँधी ल्याउँदैछ । दर्शकमा यतिबेला कुनै फिल्मको सर्वाधिक चासो छ भने त्यो यही फिल्म हो । एकपछि अर्को भित्रिएका नयाँ तथा पुराना कलाकारका कारण यो फिल्म छायांकन अगावै बहुप्रतिक्षीत बनेको छ ।सम्पुर्ण युनिट अहिले वर्कसपमा लागि सकेका छन् । घोडसवारी,नृत्य,अभिनय, फाइट्, लगायतको बिषयमा ज्ञान लिन पर्ने भएकाले फिल्मका कलाकारहरु आफुलाई क्यारेक्टरका लागि तयार पार्न लागि परेका छन् । फिल्मका मुख्य पात्र ८ जना पुरुष र एक जना महिला कलाकार फाइनल भैसकेका छन् । दशै लगत्तै फ्लोरमा जाने भनिएको निर्माण टोली सेट्को काममा धमाधम लागिरहेका छन् ।
आसुसेन फिल्म्स प्रोडक्सनको ब्यानरमा बन्ने फिल्मलाई मन्दिप गौतम र छेतेन गुरुङ लेखेका हुन, छेतेन गुरुङ र सन्तोष सेनले एक साथ निर्देशन गर्न लागेको यो फिल्म सन्तोष सेनले निर्माण गर्ने छन् । चंखे शंखे पंखे, प्रेम गीत, प्रेम गीत २, मेरी मामु पछिको निर्माता सेनको यो पाँचौं प्रोजेक्ट हो । प्रेम गीतको तेस्रो सिरिज यो बर्षको अन्तिम ‘चैत २८’ मा देशभर पर्दशनमा आउने छ
नेपाल आइडलका गोल्डन माइक विजेता सुमितको पहिलो गीत ‘समाचार’
नेपाल आइडलका गोल्डन माइक विजेता तथा दर्शकको मन जित्न सफल सुमित पाठकले आफ्नो पहिलो गीत
खुमन र सपनाको तीज गीत ‘घरबार गर्ने सोँच’मा रेजिना, रेखा र लोमशको छमछमी (भिडियो सहित)
यसवर्षको तीज पर्व क्रमश नजिकिँदैछ । युट्युबमा दिनहूँ तीज गीतका भिडियो सार्वजनिक हुन थालेका छन्
यसवर्षको तीज पर्व क्रमश नजिकिँदैछ । युट्युबमा दिनहूँ तीज गीतका भिडियो सार्वजनिक हुन थालेका छन् । जसले तीज पर्व नजिकिएको आभाष हुन थालेको छ । यसैक्रममा शुक्रबार ‘घरबार गर्ने सोँच’बोलको तीज गीत सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच भिडियोको प्रिमियर गर्दै गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
गायक निल गुरुङको “यो आँखाको नानि” सार्बजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौँ : अमेरिका निवासी बरिष्ट गीतकार तथा साहित्यकार सर्जक अम्बिका गुरुङको शब्द तथा गायक निल
काठमाडौँ : अमेरिका निवासी बरिष्ट गीतकार तथा साहित्यकार सर्जक अम्बिका गुरुङको शब्द तथा गायक निल गुरुङको सुमधुर आवाजमा सजिएको नयाँ गित “यो आखाँको नानी” को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । सयौं चर्चित गीतहरुलाइ आफ्नो मिठो शब्दमा उतारेर नेपाली गित संगीतलाइ नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल गीतकार गुरुङ मोफसलमा बसेर सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुने चर्चित नाम हो ।
गायक निल गुरुङको नै संगीत रहेको यसको गीतको भिडियोलाई निर्देशक अर्जुन अधिकारिले निर्देशन गरेका छन् भने छायाँकार उत्सब दाहालले छायांकन गरेका हुन् । सार्बजनिक म्युजिक भिडियोमा मोडलद्वय अनिश शाह र भूमिका केसी लाइ फिचरिङ गरिएको छ । भिडियो हेर्नुहोस :
गायिका ज्योति मगरले आफ्नो क्रेज अझैं नघटेको दावी
काठमाडौं– गायिका ज्योति मगरले आफू गुमनाम नभएर दर्शकहरुको मन मुटुमै बस्न सफल भैरहेको बताएकी छिन्
काठमाडौं– गायिका ज्योति मगरले आफू गुमनाम नभएर दर्शकहरुको मन मुटुमै बस्न सफल भैरहेको बताएकी छिन् । सुत्र टिभिसँगको कुराकानीका क्रममा गायिका मगरले आफ्नो क्रेज अझैं नघटेको दावी समेत गरिन् । अन्तरवार्ताका क्रममा पत्रकारले ज्योतिको क्रेज घटेको हो ? भनेर सोधेको प्रश्नमा गायिका मगर र पत्रकारबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । अहिले पनि गीत संगीत र भिडियोहरुमा आफू उतिकै व्यस्त रहेको भन्दै आफ्नो क्रेज नघटेको दावी समेत गरिन् ।
उनले ज्योति मगरले समाजमा विकृति ल्याएको आरोप छ नि भनेर पत्रकारले प्रश्न सोधेपछि उक्त कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरिन् । उनले उल्टो प्रश्न गरिन, ‘तपाईको लगाएको पहिरन ठिक छ भन्ने ग्यारेन्टी के ? मैले कस्तो पहिरन लगाउनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाउने कसले ? गापयका मगरले आफ्नै क्षेत्रका साथीहरुले आफूप्रति डाह गरेको आरोप समेत लगाइन् । उनले कुनै दिन राजनीतिमा आउन सक्ने समेत संकेत गरिन् । हेर्नुस भिडियो कुराकानी l
दिनहु नृत्य गर्दा के हुन्छ ?
काठमाडौ । नृत्य भनेको एउटा कला हो । यो कलामा जो कोहि पनि रम्न सक्छ
काठमाडौ । नृत्य भनेको एउटा कला हो । यो कलामा जो कोहि पनि रम्न सक्छ । नृत्य गर्न जो कोहिलाई पनि मन पर्छ । बिषेश गरेर स९ साना बच्चाहरलाई यसमा बढी सोख रहेको हुन्छ । नृत्य मनोरन्जन मात्र नभएर हाम्रो शरीरमा हुने फाइदा पनि रहेको छ । नृत्य धेरै प्रकारका रहेका हुन्छन ।
यो गर्नाले हामि स्वास्थ रहन्छौ नृत्य गर्नाले हाम्रो शरीरलाई फिटराख्ने मात्र नभई शरीरको समग्र विकासमा मद्दत पुर्याउँछ । यसले निर्णय लिने र तनावसँग लड्ने क्षमता बलियो बनाउँछ ।
जसले गर्दा उनीहरूलाई ठूला र महत्वपूर्ण काम गर्न प्रेरणा मिल्छ । डान्स गर्दा एक्लोपन, डिप्रेसनजस्ता समस्याबाट पनि टाढा रहन सकिन्छ । डान्सले स्वस्थ राख्नुका साथै मुडलाई सधैँ कुल राख्न मद्दत पु९याउँछ ।त्यसैले हामि स्वास्थ रहन दिनहु नृत्य गरौ र स्वास्थ बनौ ।
हाफ पाइन्ट लगाएर बेली डान्स गर्दा नायिका जान्वीलाई के भयो ?
एजेन्सी । बलिउड नायिका श्रीदेवीकी छोरी जान्वी कपुरले डेब्यू चलचित्र ‘धडक’बाट ब्यापक चर्चा पाइन् ।
एजेन्सी । बलिउड नायिका श्रीदेवीकी छोरी जान्वी कपुरले डेब्यू चलचित्र ‘धडक’बाट ब्यापक चर्चा पाइन् । यि सुन्दरीले आमाको इज्जत राख्ने धेरैले प्रशंसा नै गरे । तर पछिल्लो समय जान्वी प्रेम रोमान्स र विभिन्न काण्डका कारण आफ्नै फ्यानहरकामाझ विबादित बन्दै जान थालेकी छिन् । जान्वी कपुरले हालै खुलेर बेली डान्स गरिन् । उक्त भिडियोलाई मोवाइलमा मात्र सिमित नराखी उनले संसारलाई देखाउन चाहिन् । र भिडियो इन्स्टाग्राममा पोस्ट भएपछि उनलाई गाली गर्नेको अहिले ओइरो नै लागेको छ ।
जान्वीले बेली डान्सको बेइज्जत गरेको भन्दै दर्शकले उनलाई आफन्त र चिनेजानेकाले मात्रै नभई डाईहार्ट फ्यानले पनि औधी गाली वर्षाएका छन् । जुन भिडियोमा उनी जान्वीले हाफ पाइन्टमा देखिएकी छिन् । जहाँ धेरैले उनले गरेको डान्स बेली डान्स नभएको भन्दै तर्क समेत गरेका छन् । यो भिडियो बाहिरिएपछि निकै विबादमा तानिएकी यि सुन्दरीलाई धेरैले अभिनय र नृत्य दुबै सिक्नु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘तख्त’ नामक चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी यि सुन्दरीले सामाजिक संजालमा देखाउने क्रियाकलापले बेला बेलामा चर्चामा आउने गर्छिन् ।
ओछ्यानमा खिचेको टपलेस फोटकोे शिकारमा परिन हलिउड अभिनेत्री किम
काठमाडौं । हलिउड अभिनेत्री तथा टिभी पर्सनालिटी किम कदार्शियनले ओछ्यानमा खिचेको टपलेस फोटोले सामाजिक संजालमा
काठमाडौं । हलिउड अभिनेत्री तथा टिभी पर्सनालिटी किम कदार्शियनले ओछ्यानमा खिचेको टपलेस फोटोले सामाजिक संजालमा हंगामा मच्चाएको छ । उनले विभिन्न भावभंगीमा टपलेस फोटो खिचाएकी छिन् । सन् २००३ सम्म गुमनामजस्तै रहेकी किम पूर्वप्रेमीसँगको सेक्स टेप लिक भएपछि चर्चामा आएकी थिइन् । उनी धेरैपटक कामुक अभिनेत्रीको शीर्ष १० सूचीमा पनि परेकी छिन् ।
उनी इन्स्टाग्राममा संसारको सबैभन्दा बढी फलोअर्स भएकी छैटौं सेलेब्रेटी पनि हुन् । विभिन्न कारणले विवादमा आइरहने उनी अहिले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको फोटोले चर्चामा छिन् । उनले ‘गुड मर्निङ’ भनेर फोटोहरु पोस्ट गरेकी छिन् ।
उनको ‘किपिङ अप विथ द कदार्शियन’ चर्चित टेलिभिजन सिरिज हो । उनको सन् २०१८ मा तीन सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति थियो ।
सुन्दर देखिनका लागी टिभी सिरियल बिदाइकी नायिका साराले आफ्नो ओठको सर्जरी गराएपछि भयो यस्तो हालत
एजेन्सी – फिल्मी क्षेत्रमा अभिनेत्रीहरुले आफुलाइ सेक्सी देखाउन अनेक गरेका हुन्छन् । आफूलाई कसरी हट
एजेन्सी – फिल्मी क्षेत्रमा अभिनेत्रीहरुले आफुलाइ सेक्सी देखाउन अनेक गरेका हुन्छन् । आफूलाई कसरी हट र सेक्सी देखिन्छ त्यस्तै गर्न हर अभिनेत्रि लाग्ने गर्छन् । फिल्म क्षेत्रमा आफुलाइ टिकाइराख्नका लागि अभिनेत्रीहरु सर्जरी गरेरै भएपनि ‘सेक्सी’ बन्न खोज्छन् ।त्यस्तै भारतीय मिडियाका अनुसार चर्चित अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र प्रियंका चोपडाले पनि ओठको सर्जरी गरेका थिए ।
त्यसैगरी अर्की यस्ति अभिनेत्रि जसले ओठको सर्जरी गरेकी छन् ।तर, उनी सेक्सी देखिनुको सट्टा ट्रोलको शिकार बनेकी छन् । सारा टिभी अभिनेत्री मात्र नभएर टिभी होस्ट पनि हुन् भने उनले फिल्म पनि गरिसकेकी छन् ।उनले ओठको सर्जरी गरे पछि आफ्नो फोटो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी थिइन् । इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको उक्त ओठको सर्जरी गरेको फोटो ट्रोल बनेको छ । उनका प्रशंसकले उनलाई फ्यानबाट पाएको माया फिर्ता दिन खोजेको भन्दै ट्रोल गरेका छन् ।
रणवीर र आलियाको बिबाहको कुरा कहाँ पुग्यो ?
एजेन्सी । यति बेला बलिउड सुन्दरी नायिका आलिया भट्ट र नायक रणवीर कपुरको प्रेमले गर्माएको
एजेन्सी । यति बेला बलिउड सुन्दरी नायिका आलिया भट्ट र नायक रणवीर कपुरको प्रेमले गर्माएको छ ।केही दिन अघि मात्रै आलिया र रणवीर एकसाथ अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नयाँ वर्ष मनाएर भारत फर्किएका छन् । जुन तसिव्र सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको थियो ।उनीहरको प्रेमलाई परिवारले पनि स्विकारी सकेको छ ।
यसै बिच रणवीर कपूरकी दिदी रिद्धिमा कपूर साहनीले भाइ रणवीर कपूर र उनकी प्रेमिका आलिया भट्टलाई सुनको औँठी उपहार दिएको बताइएको छ ।औँठीमा आलिया र रणवीरको नामको पहिलो अक्षर ‘ए आर’ लेखिएको छ ।आलिया र रणवीरले पनि यो औँठी खुसीसाथ स्वीकार गरिसकेका छन् ।
यसै वर्ष आलिया र रणवीर अभिनित फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’ रिलिज हुनेछ । अयान मुखर्जीको निर्देशन रहेको फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’ को सेट मै आलिया र रणवीर नजिकिएका थिए । समाचार अनुसार यो जोडीले अर्को वर्ष बिहे गर्न सक्ने बताइउको छ ।
छुट्टी मनाउन अमेरिका पुगेका अर्जुन–मलाइकाले भेटे ऋषि कपुरलाई ,तस्विर सेयर गर्दे लेखे यस्तो स्टाटस
एजेन्सी । बलिउडमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएका प्रेम जोडि हुन् मलाइका अरोडा र अर्जुन
एजेन्सी । बलिउडमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएका प्रेम जोडि हुन् मलाइका अरोडा र अर्जुन कपुर । उनिहरु प्रेमका कारण नै चर्चामा आउने गर्दछन् । सोसल मिडियामा उनिहरुका तस्विरहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गर्दछन् ।
यतिबेला उनिहररु न्यूयोर्कमा छुट्टी मनाइरहेका छन् । छुट्टी मनाइरहेका बेला मलाइका अर्जुनले नायक ऋषि कपुरलाई पनि भेटेका छन् । उनिहरुले ऋषिलाई भेटेका तस्विरहरु यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल भएका छन् । नितू कपुरले ऋषि कपुरलाई भेट्न पुगेका मलाइका र अर्जुनको तस्बिर सेयर गरेककी छन् ।
उक्त तस्विर शेयर गदै नितू कपुरले लेखिन्, छिन हाम्रो आफ्नै घरका बच्चा अर्जुन र मायालु मलाइकासँग एउटा रमाइलो साँझ ।’ सोहि तस्विर मलाइकाले पनि आफ्नो सोसल मिडिया अकाउन्टमा सेयर गर्दै लेखेकी छिन् । धन्यवाद नितू जीर र ऋषि अंकल, यस्तो सुन्दर र प्रेमिल साँझका लागि ।
दीपिकाले किन पति रणवीर सिंहलाई सधै ब्यागमा राख्न चाहिन् ?
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् दीपिका पादुकोण । आफ्नो पतिलाई ब्यागमा राख्न चाहन्छिन् ।
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् दीपिका पादुकोण । आफ्नो पतिलाई ब्यागमा राख्न चाहन्छिन् । दीपिकाले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा आफ्नो निजी जिन्दगीसँग जोडिएको केही कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
पिंकभिलाले लिएको अन्तर्वार्तामा सोधिएको थियो कि– केही तीन नाम बताउनुस्, जसलाई तपाईं आफ्नो ब्यागमा राख्न चाहनुहुन्छ ।’ दीपिकाले भनिन्, मेरा श्रीमान् रणवीर कपुर, बहिनी र आमालाई राख्न चाहन्छु ।’
यसका साथै उनले आफूलाई यात्रा गर्न खुब मनपर्ने र त्यो समयमा आफूलाई चाहिने सबै कुरा ब्यागमा राख्ने गरेको बताइन् । उनले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छिन्, ‘
रत्न प्रसाद अनामनी श्रेष्ठको शब्दमा ‘माया के हो’ सार्बजनिक
प्रताप दासको स्वरमा नयाँ गीत भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ । सार्बजनीक ‘माया के हो’बोलको गीतमा
प्रताप दासको स्वरमा नयाँ गीत भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ । सार्बजनीक ‘माया के हो’बोलको गीतमा शब्द रत्न प्रसाद अनामनी श्रेष्ठको र संगीत रिमेश कुमारको रहेको छ । लिगेश भट्टराइले निर्देशन गरेको भिडियोलाइ सुमन कोइरालाले छायाँकन गरेका छन् भने बिष्णु खड्काले सम्पादन गरेका छन् । माया प्रेमको भाव बोकेको गीतलाइ बिशाल निरौलाले संगीत संयोजन गरेका हुन् । भिडियोमा रबी अधिकारी र चन्डेस्वरी कपालीलाइ फिचर्ड गरिएको छ । सेलिब्रेटी नेपालले निर्माण गरेको भिडियो लाइ सेलिब्रेटी नेपालको अफिसियल यु ट्युब मार्फत सार्बजनिक गरिएको हो ।
फेम नेपालको आयोजनामा चर्चित गायक सुगम पोखरेलको ‘1 एमबी फेरी त्यो दिन’ नेपाल टुर हुने
फेम नेपालको आयोजनामा चर्चित गायक सुगम पोखरेलको ‘1 एमबी फेरी त्यो दिन’ नेपाल टुर हुने भएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुन लागेको यो कन्सर्ट सुगमको पहिलो इन्डोर कन्सर्ट हुनेछ । जुलाई १२ तारिक पोखराको किङ्स लाउन्जबाट सुरु हुने कन्सर्ट जुलाई १३ तारिक बुटवलको द कन्सेप्ट, जुलाई १५ तारिक नारायणगडको ग्यालेक्सी एम्पायर, जुलाई १७ तारिक इटहरीको इम्पेरियल, जुलाई १९ तारिक धरानको भिन्टेज हुँदै जुलाई २६ तारिक काठमाडौँको प्ले बोई क्लबमा हुनेछ । काठमाडौँ बाहिर साँझ ६ बजे देखि ११ बजे सम्म आयोजना हुने कन्सर्ट काठमाडौँमा भने राति ९ बजे देखि बिहान ४ बजे सम्म आयोजना हुनेछ ।
कन्सर्टमा गायक पोखरेलले आफ्ना दर्जन बढी नयाँ तथा पुराना गीतहरु प्रस्तुत गर्ने छन् । यसअघी काठमाडौँ टुँडिखेलमा सुगमसंगै लाउरे, स्वप्न सुमन लगायतको कन्सर्ट गरेको फेम नेपालले मोफलका दर्शक श्रोताको मागलाई ध्यानमा राख्दै सुगम पोखरेलको अल नेपाल कन्सर्ट गर्न लागेको बताएको छ । फेम नेपालका प्रबन्ध निर्देशक बिमल पछाईले ‘नेपाली संगीतको उत्सव’ भन्ने नाराका साथ आगामी दिनमा अन्य गायक गायिकालाई समेटेर अन्य साङ्गितिक टुरहरुको आयोजना गरिने बताए । नेपाली संगीत र कला क्षेत्रलाई स्टेजमा उतार्ने कार्यमा अग्रसर फेम नेपालले ‘सेलिब्रेटिङ नेपाली म्युजिक’ नारालाई आत्मसाथ गरेको छ ।
रोशन पोखरेल, काठमाडौँ – गायन क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायिका हुन नित्याशिवाको आवाजमा रहेको
रोशन पोखरेल, काठमाडौँ – गायन क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायिका हुन नित्याशिवाको आवाजमा रहेको फिलिली फिलिली गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको छ । नेपाली कथानक चलचित्र सम्हाली राख है मा समावेश भएको सो गीतमा प्रेम र रोमान्सलाई निकै कलात्मक रुपमा समेटिएको छ ।
राजेश कुमार को संगीत तथा शंकर अधिकारी घायलको शव्दमा सम्हाली राख है बाट सिलिली सिलिली पिरतिको डुङा फिलिली बोलको लिरिकल भिडियो एबि पिक्चर्स को युटुब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको हो । शंकर कार्की को निर्माण र राजु लामा को निर्देशनमा यो चलचित्र निर्माण भएको हो । गीत सुन्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोला ।
समाजमा भएको तितो यथार्थ श्रीमान परिवारको खुशिको लागि बिदेशमा पसिना बगाउदै
बूढो बिदेशमा पसिना बगाउदै बुढी अर्कैसङ मस्ती गर्दै रमाउदै, मनै छुने भिडियो l समाजमा भएको
बूढो बिदेशमा पसिना बगाउदै बुढी अर्कैसङ मस्ती गर्दै रमाउदै, मनै छुने भिडियो l समाजमा भएको तितो यथार्थ श्रीमान परिवारको खुशिको लागि बिदेशमा पसिना बगाउदै आधा जिन्दगी बिताइरहेका हुन्छन भने यता श्रीमति पैसा र बैशले मात्तिएर अर्कै केटासँग रमाउदै मस्ती गर्दै हिडेको हामिले देखेकै कुरा हो । सबैजना एउटै त हुदैनन । कतिपय दिदी बहिनीहरु आफ्नो धर्म र कर्तव्य नबिर्सी कुलतमा नलागी आफ्नो श्रीमानले आफ्ना लागि दुख गरेको बुझेर घरपरिवार सम्हालेर बस्नुभएको छ ।
तर कतिपयले चाहिँ सबै बिर्सिएर पैसा र बैशले मात्तिएर कुलतमा फसेका अनि घरबार नै बिगृएका उदाहरण धेरै छन । यो भिडियो मर्फत समाजलाई सन्देश दिन खोजिएको छ । गाउको घरमा आमा छोरा र बुहारी छन । छोरा परिवारको खुशिका लागि बिदेश जान्छन । श्रीमान बिदेशमा बालुवामा बेल्चा हान्दै पसिना बगाउदै हुन्छन भने श्रीमती यता अर्कै केटासँग रमाइलो घुमघाम अनि मस्तिमा लठ्ठ हुन्छिन ।बुढि आमा घरमा सकि नसकी काम गर्छिन भने बुहारी दिनै घुम्दै रमाउदै दिन बिताउछिन ।
त्यो केटाले पनि पैसा र मोज मस्तिका लागि उनिसङ झुटो प्रेमको नाटक गर्छ । उनी त्यो केटाको मायामा पर्छे आफ्नो बिदेश गएको श्रीमान बिर्सिन्छे । उनिहरु बिच दिनै यौन सम्पर्क हुन थाल्छ । अचानक उनको पेटमा3महिनाको बच्चा भएको थाहा हुन्छ । डराउदै प्रेमी त्यो केटालाई फोन गर्छे तर त्यसले उल्टै कराउछ अनि तैले गर्दा नै यो सब भएको हो अब मलाई केही नभन्नु भन्छ र फोन नै स्विच अफ गर्छ । उनी अब के गरौ कसो गरौ हुन्छिन । अनि बीस पिएर आत्महत्या गर्छिन । तल भिडियोमा हेर्नुहोला होस उड्ने छ l
गायक गोपाल प्रसाद भट्टराई र गायिका देवी धर्तिको आवाजमा ”जलन ” गीतको भिडियो सार्वजनिक
रोशन पोखरेल, काठमाडौँ – ब्लोसम म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतीमा गायक गोपाल प्रसाद भट्टराई र गायिका देवी
रोशन पोखरेल, काठमाडौँ – ब्लोसम म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतीमा गायक गोपाल प्रसाद भट्टराई र गायिका देवी धर्तिको आवाजमा ”जलन ” गीतको भिडियो बजारमा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा प्रेमका भावहरुलाई निकै कलात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आफनो विगत सम्झीएर निकै मनमा पिडा हुने कुरालाई गीतमा ब्यक्त गरिएको छ ।
गोपाल प्रसाद भट्टराईको शब्द सिर्जना तथा बद्रि पाठकको संगीतमा गीत निमार्ण गरिएको छ ।गीतमा माया र प्रेम र मातृभुमी प्रतिको मायालाई समेटिएको छ । सुख खोज्दै परदेश गएका प्रेमी र गाउँमा रहेकी श्रीमति विचको प्रेमको कुरालाई गीतमा समेटिएको छ । सागर गौत्तमको छायाँकन , रोशन धितालको सम्पादन तथा उदय पौडेलको निर्देशन भिडियोमा रहेको छ । ”जलन ” गीतको भिडियोमा गोविन्द भण्डारी , सोनु क्षेत्री र ब्लोसम ढकालको अभिनय रहेको छ । ”जलन ” गीतको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ।
किराँती साना बालकको यति धेरै प्रतिभा जसले रास्ट्रीय कलाकारलाई दिनेछ टक्कर
बिकट गाउँमा लुकेको किराँती बालकको यस्तो राम्रो प्रतिभा/(मिलाएर समाचार हालिदिनुस न है) नाम: निशुम राई
बिकट गाउँमा लुकेको किराँती बालकको यस्तो राम्रो प्रतिभा/(मिलाएर समाचार हालिदिनुस न है) नाम: निशुम राई | घर: टाडी मोरङ | उमेर: एघार बर्ष | सानैदेखि गित गाउन धेरै रहर लाग्ने अनि धेरै ठाउँमा पुरस्कार पनि जितेर ल्याएको / | जस्तोसुकै गीत पनि सजिलैसँग गाउन सक्ने / | नारायण गोपाल देखि दुबै मृगौला फेल समीर तामाङ सम्मका सबै गीत यति सजिलै गाउन सक्ने । तल भिडियो हेर्नुहोला l
पूजा शर्माको जन्म दिनमा देखियो यस्तो रमाइलो माहोल, आकाशले दिए महत्वपूर्ण गिफ्ट (भिडियो)
आज अर्थात वैशाख १७ गते अभिनेत्री पुजा शर्माको जन्मदिन हो । उनी आजबाट २६ बसन्त
आज अर्थात वैशाख १७ गते अभिनेत्री पुजा शर्माको जन्मदिन हो । उनी आजबाट २६ बसन्त पार गरेर २७ बर्षमा टेकेकी छिन् । यिनको फ्यानले आज राजाधानिमा एक कार्यक्रमा गरेर भब्य रुपमा उनको जन्मदिन मनाईदिएका छन् ।
उनलाई फ्यानले दिएको उपहार हेर्दा जो कोही चकित पर्ने गर्छ । सुनको सिक्री देखी सुनको ब्रास्लेट लगाएत कैयौ उपहार दिएर उनको जन्मदिन मनाएका हुन् । विशेषतः फिल्म ‘प्रेम गीत’ बाट चर्चामा आएकी पुजाले ‘थ्रि लभर्स’बाट डेब्यु गरेकी हुन् । प्रेम गीतको सफलता सँगै उनले फ्यान फलोअर्स कमाइन् ।
प्रेम गीत पछि उनले तीन वटा फिल्ममा अभिनय गरिन् । म यस्तो गीत गाउँछु र रामकहानी पछि पूजा फिल्म सम्हालिन्छ कहिले मनमा व्यस्त छिन् । उनले हालै पोइ पर्यो काले फिल्म २० लाख पारिश्रमिकमा साइन गरेकी छन् ।
जुम्ल्याहा दिदी बहिनी गंगा जमुनालाई भेट्ने जो कोही पर्छन् यसकारण दंग
गुल्मी । गुल्मी एउटा बिकट जिल्लामा गनिने जिल्ला थियो केही समय अघि । तर अहिले
गुल्मी । गुल्मी एउटा बिकट जिल्लामा गनिने जिल्ला थियो केही समय अघि । तर अहिले गुल्मी विकट होइन विकाशोन्मुख जिल्ला बनिसकेको छ । गुल्मीमा भईरहेको बिकाश र प्रबिधिले अहिले गुल्मीले गति फेरेको छ । यहि समयमा हामी रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउपालिका पुग्दै थियौ, त्यहा हामीले चकित पार्ने दुई जना जुम्ल्याहा दिदीबहिनी भेटयौ ।
उनीहरुको स्वर र कलाले हामीलाई मन्त्र मुग्ध पनि बनायो । उनीहरुले गीतमात्र हैन मादल पनि यस्तो कडा बजाउछन, हेरौ उनीहरुको चकित पार्ने स्वर, र मनपरे सेयर पनि गर्नुहोला यि गाउका जादूमय स्वरका धनी दुइ बहिनीलाई
गायिका कार्कीको एकल गीतिसङ्ग्रह ‘सुनमाला’ सार्वजनिक
‘हौली हौली’ गीतमा नेहा कक्करले बाथरुममा डान्स गरेको भिडियो भाइरल
मुम्बई । बलिउडकी चर्चीत गायिका हुन नेहा कक्कर । बेला बेलामा चर्चामा आउने उनि यति
मुम्बई । बलिउडकी चर्चीत गायिका हुन नेहा कक्कर । बेला बेलामा चर्चामा आउने उनि यति खेर पनि चर्चामा आएकी छिन् । उनका लाखौ फ्यान छन् । उनले जुन गीत सार्वजनिक गर्छिन्, ती गीतले निकै चर्चा परीचर्चा बटुलेको हुन्छ ।
उनि आफनो प्रेमि हिमासं कोहली संग ब्रेकअफ हुदा निकै चिन्तामा डुवेकी थिइन र उनि गित गाउदा गाउदै इस्टेजमै आफ्नो प्रेमीलाई सम्जिदै निकै रोएकी थिइन । उनले यति खेर आफ्ना तस्वीर र भिडियो इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी छिन् ।
हालै नेहाले एक भिडियो इन्स्टाग्राममा बाथरुममा नाच्दै गरेको देख्न सकिन्छ । उनले उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेकी छिन् ।
नेहाले हौली हौली’ गीतमा नाचेको भिडियो शेयर गर्दै फ्यानलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधेकी छिन् । उक्त भिडियोमा शेयर गरेपछि उनको निकै चर्चा चलेको छ ।
राई र विश्वकर्मा परिवारमा झ्याँइ–झयाँइ मागी विवाह, परिवारले स्विकारे पछि प्रेमले पायो सार्थक रुप
धरान- सुनसरी धरानको एक राई परिवारले दलित बुहारीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै इ मागी विवाह गरेर
धरान- सुनसरी धरानको एक राई परिवारले दलित बुहारीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै इ मागी विवाह गरेर घर भित्र्याएका छन् । धरान उपमहानगरपालिका–१३ का भीमज्वाला राईको परिवारले धरान १५ बस्ने भाइबुहारी सुष्मा कालिकोटेलाई शनिवार रितपूर्वक झ्याँइ–झ्याँइ मागी विवाह गरि घर भित्र्याएका हुन् ।
भीमज्वालका भाई नवीन राई र दलित समुदायकी सुष्मा कालिकोटे ९विश्वकर्मा०ले आफ्नो प्रेमलाई सार्थक बनाउन गन्धर्व विवाह गरेका थिए ।पछि परिवारले बिहे स्विकार गर्दैराई समुदायको साँस्कृतिक चलन अनुसार ‘चोरको शोर’ बुझाएर मागी विवाह गर्ने केटी पक्षसँग अनुमति लिएका थिए ।
त्यसपछि शनिवार दुबै पक्षको सहभागीतामा बेहुला र बेहुलीको विवाह रितपूर्वक झ्याँइ–झ्याँइ सम्पन्न भएको थियो ।दलित र गैरदलित व्यक्तिहरूलेले अन्र्तजातीय विवाह गर्ने नवीन र सुष्माको जोडीलाई टीका लगाउँदै सफल दामपत्य जीवनको शुभकामना दिएका थिए ।
अभिनेत्री श्वेता खड्कालाई अचानक ट्युमर देखियो, दिल्लीमा गरियो आकस्मिक शल्यक्रिया
काठमाडौं। अभिनेत्री श्वेता खड्काले च्युँडोबाट तल्लो तथा घाँटीको माथिल्लो भागमा ट्यूमरको उपचार गरेकी छन् ।
काठमाडौं। अभिनेत्री श्वेता खड्काले च्युँडोबाट तल्लो तथा घाँटीको माथिल्लो भागमा ट्यूमरको उपचार गरेकी छन् । सो उपचारपछि उनले आफूले दोस्रो जीन्दगी पाएको उल्लेख गरेकी छन् । नयाँ चलचित्र ‘हेलो जीन्दगी’ छायाँकनका लागि लण्डन गएकी अभिनेत्री खड्कालाई च्युँडोबाट तल्लो तथा घाँटीको माथिल्लो भागमा ट्यूमर भएको थाहा भएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अभिनेत्री श्वेताले चलचित्र छायाँकनको क्रममा असह्य पीडा भएपछि चिकित्सकलाई देखाएको र ट्युमर रहेको थाहा भएको जानकारी दिएकी हुन् ।चिकित्सकले तत्कालै शल्यक्रिया गर्नु पर्ने सल्लाह दिएपछि लण्डनबाट भारतको दिल्ली आएर द्रुत प्रक्रिया मार्फत शल्यक्रिया गरिएको र अहिले आफू स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको उनले जानकारी दिएकी छन् ।
आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा गरेको भावनात्मक पोस्टमा अभिनेत्री खड्काले लेखेकी छन्, ‘मेरो दोस्रो जीन्दगी, मसँग जीन्दगीले दोस्रो पटक खेल खेल्यो । भन्छन्, जीवन अनिश्चित छ, त्यो सत्य हो । थाहै हुँदैन कहिले के हुन्छ र सपनाहरु आफ्नै अघि विलिन हुन्छन् । म नयाँ चलचित्र हेलो जीन्दगीमा काम गर्न नसक्ने जानकारी गराउनु पर्दा निकै दुखी छु ।’
सलमानकी भान्जी कुनै सुन्दर राजकुमारी भन्दा छैनन् कम, सलमानकै पहलमा खेल्दै छिन् फिल्म
मुम्बई। बलिउड चर्चीत सुपरस्टार नायक सलमान खानको नयाँ फिल्म दबंग–३’दुई स्टारकिड्स लञ्च हुने भएको छ
मुम्बई। बलिउड चर्चीत सुपरस्टार नायक सलमान खानको नयाँ फिल्म दबंग–३’दुई स्टारकिड्स लञ्च हुने भएको छ । एलिजा सलमानकी दिदी अलविराकी छोरी हुन् । उनि दबंग–३’ मा बलिउडमा डेब्यू गर्ने पक्का पक्कि भएकी छिन् । उनको सिववाह विवाह अभिनेता तथा निर्माता अतुल अग्निहोत्रीसँग भएको छ।
उता महेश मांजरेकरकी छोरी अश्वमीले पनि यही फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यू गर्दैछिन्। र यो फिल्ममा सोनाक्षी सिन्हा सलमान खानको अपोजिट रोलमा हुनेछिन्। फिल्मको निर्देशक प्रभु देवा हुन्। दबंग–३ को महेश्वर र माण्डूको शुटिङ पूरा भएपछि महाराष्ट्रकाृ वाईमा करिव ८० दिनको शेड्यूल छ। यो फिल्म ३१ डिसेम्बरमा रिलीज हुने बताइएको छ।
करिना कपुरले भनिन् :मेरा लागि सैफ अली मात्र थिए
बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर आफ्नो जीवनका बारेमा खुला रुपमा बोल्दै आउने नायिकाका रुपमा चिनिन्छन् ।
बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर आफ्नो जीवनका बारेमा खुला रुपमा बोल्दै आउने नायिकाका रुपमा चिनिन्छन् । उनी आफ्नो साथी वा पति जो कसैको बारेमा खुलेर बोल्ने गर्छिन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, उनले पति सैफ अलीको बारेमा गरेको खुलासा ।
एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै करिनाले भनेकी छन्, ‘मेरो करियरमा सधैं सैफको साथ पाएँ ।’ उनले थपेकी छन्, ‘जब, म आफ्नो काममा व्यस्त हुन्थेँ, त्यस समयमा सैफको बढी समर्थन पाउथेँ ।’
अन्तर्वार्ताका क्रममा करिनाले आफू र श्रीमान सैफ अलीबीच उमेरको अन्तर बारेमा बोल्दै भनिन्, ‘मेरोभन्दा उनको उमेर १० वर्ष बढी छ । उनी दुई बच्चाका पिता थिए । तर, मेरा लागि सिर्फ सैफ अली मात्र थिए ।’ अन्तर्वार्तामा उनले आफू र सैफबीच भएको उमेर अन्तर व्यक्तिगत मामिला भएको बताइन् ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा करिनाले छोरा तैमुरका बारेमा पनि बोलेकी थिइन्, ‘आमाको रुपमा मैले तैमुर पाएँ । उनी मेरा लागि एक हिस्सा हुन् । उनीबिना एक घण्टा पनि रहन सक्दिनँ ।’ एजेन्सी
गायिका लक्ष्मी रेग्मी को मार्मिक लोक गीत “रुने पालो ” बजारमा (भिडियासहित)
प्रियसी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतिमा गायक मौसम गुरुङ र गायिका लक्ष्मी रेग्मीको को मार्मिक लोक गीत “रुने पालो ” बजारमा आएको छ ।जीवन भोगाइका क्रममा बाध्यताले आफुलाई मन परेको प्रेमीलाई गुमाउनु पर्दाको पिडालाई गीतमा चित्रण गरिएको छ । पिडा भुल्नको लागी आफनी प्रेमीकालाई निकै आग्रह गायकले गरेका छन ।
दुख र सुख जिवनमा आइरहने कुरा भएकाले पनी मायामा घात गर्दा पिडा हुने र त्यसको सजाय आफुले पनी भोग्नुपर्ने कुरालाई निकै मार्मिक रुपमा समेटिएको छ ।
गणेश परियारको शब्द तथा लय सिर्जनामा जीवनको वास्तविक भावहरूलाई जीवन्तता दिइएको छ । “रुने पालो ”गीतको भिडियोलाई बविता पुरीले गरेकी छन भने सम्पादन राजेश कुमारले गरेका छन । भिडियोमा टिका भुजेल र सानी परियारको अभिनय देख्न सकिन्छ ।हेर्नुहोस भिडियो..
लोकप्रिय कलाकार कार्कीको ‘मुना पलायो’ सार्वजनिक
काठमाडौं, १३ बैशाख । लोकप्रिय कलाकार एवम् राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कार्कीको गीत
काठमाडौं, १३ बैशाख । लोकप्रिय कलाकार एवम् राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कार्कीको गीत ‘मुना पलायो’ बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय लोक सास्कृतिक संघले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उक्त गीतको विमोचन गरेको हो । बिमोचित उक्त गीतमा राजेन्द्र कुमार कार्की, कुलेन्द्र बिक र मेलिना राईको सुमधुर स्वर रहेको छ । बिष्णु खत्रीको संगीत रहेको सो गीतको रचनाकार राजेन्द्र कुमार कार्की हुन् ।
मिलन श्रेष्ठको निर्देशन रहेको उक्त गीतमा सिर्जु अधिकारी, सन्ध्या सानु, ओबी रायमाझी, सञ्जीव ठकुरी, जयराम गिरी र कल्याण कार्कीको र अभिनय रहेको छ ।
ओमन राणाको नृत्य निर्देशन, सागर गौतमको छायांकन र रोशन धितालको सम्पादन रहेको छ
‘ए मेरो हजुर ३’ पछि अनमोल र सुहानालाई लिएर ‘भागवत’ बनाउँदै झरना थापा
काठमाडौँ-नायिका झरना थापाले फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ बनाउने भएकी छन् । ‘भागवत’ ए मेरो
काठमाडौँ-नायिका झरना थापाले फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ बनाउने भएकी छन् । ‘भागवत’ ए मेरो हजुर ३ भन्दा अगाडि बनाउन लागेको तर ‘ए मेरो हजुर २ ‘राम्रो चलेपछि भागवतलाई थाति राखेर ‘ए मेरो हजुर ३’ बनाउन लागेको बताइएको छ ।
झरनाले सामाजिक संजालमा आफू , सुहान र अनमोल संगै रहेको एक फोटो भागवतसंग भनेर पोस्ट गरेकी छन् । उक्त पोस्टका अनुसार फेरि झरनाले अनमोल र सुहानालाई लिएर भागवत चाँडै बनाउने अनुमान लगाएको छ ।
ए मेरो हजुर ३’ ले राम्रो कमाइ गरेको चर्चा चलेको छ । अनमोल केसी नव अभिनेत्री सुहाना थापाको अभिनयलाई देर्शकले एक दमै रुचाएको छ ।‘ए मेरो हजुर ३’ मा अभिनेत्री सुहाना थापाले राम्रो अभिनय गरेकी छिन् । सबैले सुहानाले राम्रो काम गरेको भन्दै तारिफ गरेका छन् ।
गोठालो जादा रोमान्स गरेको भिडियो सार्बजनिक (भिडियो सहित)
ऋतु साही कौशल , ज्ञानु मायालु र रमेश कौशलको संयुक्त लोक दोहोरी गीत ” गोठालो
ऋतु साही कौशल , ज्ञानु मायालु र रमेश कौशलको संयुक्त लोक दोहोरी गीत ” गोठालो ” सार्बजनिक भएको छ l अविरल फिल्म्सको बजार ब्यबस्थापनमा रहेको उक्त गीतको दृश्य निर्माण पनि अविरल फिल्म्सले नै गरेको छ l गाउ घरमा गोठालो जादा टाढै देखि देखेर हेरेर मन पराएका भाबहरु गीतमा देखाउन खोजिएको छ l मायालुलाई गोठालो जाने निउमा भेट्न मन छ भनेर कल्पना गरेको कुरा हरु भिडियोमा देखिएको छ l
अत्यन्तै मार्मिक र यथार्थ बिसय बस्तुलाई समाबेस गरिएको उक्त गीतको म्युजिक भिडियोलाई बिष्णु भट्टराईले निर्देशन छायांकन तथा सम्पादन गरेका छन् भने भिडियोमा बुटवलका चर्चित हास्य कलाकार बिष्णु जी पाण्डे माइलाबा , किशोर थापा र सुमी घर्ति मगरको अभिनय रहेको छ भने सगुन शर्माको श्रीन्गार देख्न सकिन्छ l
किशोर थापाको कोरियोग्राफी रहेको छ l रमेश कौशल , ऋतु शाहीको स्वर रहेको गीतमा रमेश कौशलकै लय सब्द रहेको छ रुपन्देहीको देवदह को विभिन्न स्थानमा छायांकन गरिएको भिडियो आजै मात्रै सार्बजनिक भएको छ हेरौ सोहि भिडियो
सुनमाला लिएर आइन गायिका सुनिता कार्की (भिडियो सहित)
काठमाडौं : गायिका सुनिता कार्कीको एकल गीतिसङ्ग्रह ‘सुनमाला’ सार्वजनिक भएको छ । विएफबिएस गोरखा रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारण
काठमाडौं : गायिका सुनिता कार्कीको एकल गीतिसङ्ग्रह ‘सुनमाला’ सार्वजनिक भएको छ । विएफबिएस गोरखा रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै गीतिसङ्ग्रह ‘सुनमाला’ सार्वजनिक गरिएको हो ।गीतिसङ्ग्रहलाई सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार सुमन खरेल, एनटिभी पल्सका प्रमूख मनोहरी थापा र गायिका कार्कीकी आमा तारा कार्की, चन्द्रकला भट्टराई, सञ्चारकर्मी सुभाष प्रधान र गीतकार तथा सञ्चारकर्मी तुलसी वस्नेतले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका थिए ।म्युजिक नेपालको प्रस्तुति रहेको गीतिसङ्ग्रहमा समावेश गीतहरुमा शब्द र सङ्गीत चर्चित सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीले दिएका छन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा गायिका कार्कीले एल्बममा समावेस सबै गीतहरु प्रस्तुत गरेकी थिइन । गीतिसङ्ग्रह ‘सुनमाला’मा ‘दुनियामा…’, ‘शितल हिमाली हावा…’ ‘साथी नै चाहिँदा…’, ‘शिर शिर सिरीरी…’लगायत पाँच वटा गीतहरु समावेश गरिएको छ । एल्वममा रहेका गीतहरु मध्ये दुनियामा बोलको गीतमा भने शब्द विद्या घिमिरेले दिएका छन् ।एक दशकदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा आवद्ध सुनिताको यसअघि ‘ए बतास…’ बोलको गीत बजारमा आएको थियो । सो गीत इमेज अवार्डमा उत्कृटमा पर्न सफल भएको थियो ।
सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीको शब्द र सङ्गीतमा यस अघि सुनिताले ‘कहिले हार कहिले जीत…’ बोलको साङ्गीतिक सहकार्य गरेकी थिइन भने ‘सुनमाला’ दोस्रो सहकार्य हो ।जोयस पाण्डेले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा लक्ष्मि, दृश्य, रोशनी र जोयसलाई फिचरिङ गरिएको छ । विशाल प्रजापतिले छायाँकन गरेको गीतको भिडियोलाई उज्जल ढकालले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियो हेर्नुहोस :
मेलिना राईको आवाजमा “पिडा” हेर्नुहोस भिडियो सहित
नेपाली सुगम संगीतमा निकै रुचाइएकी गायिका मेलिना राईको आवाजमा निकै मर्म स्पर्शी गीत “पिडा” को
नेपाली सुगम संगीतमा निकै रुचाइएकी गायिका मेलिना राईको आवाजमा निकै मर्म स्पर्शी गीत “पिडा” को भिडियो बजारमा आएको छ ।मनको भित्री कुनामा उत्पन्न पिडालाई निकै समेटिएको छ । वर्षा तामाङको शब्द , सनम पुरुष राईको रहेको छ ।
कृष्णा पाण्डेको छायाँकन , रञ्जना पौडेल , तथा निर्देशन सम्राट दाहाल को रहेको छ । गीतको मर्म अनुसारको अभिनय वर्षा तामाङ र दिपक जलन विष्टको रहेको छ ।“पिडा” गीतको भिडियो हेर्नुहोस ।
सुन्दरी क्याट्रिनाका लागी यसकारण पनि छ यो वर्ष विशेष
अभिनेत्री क्याट्रिना कैफका लागि यो वर्ष विशेष हुने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । क्याट्रिन
अभिनेत्री क्याट्रिना कैफका लागि यो वर्ष विशेष हुने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । क्याट्रिन यो वर्षमा सलमान खानका साथ भारत र अक्षयकुमारका साथ सूर्यवंशी फिल्ममार्फत दर्शकमाझ छाउनेछिन् ।
अघिल्लो वर्ष फिल्ममा खासै धमाका मच्चाउन नसकेकी क्याट्रिनालाई पूर्वएथ्लेटिक च्याम्पियन पिटी उषाको बायोपिक फिल्मका लागि अफर गएको छ । रेवती एस बर्माले निर्देशन गर्ने सो बायोपिकमा पिटी उषाको भूमिकाका लागि क्याट्रिनालाई अफर गरिएको हो । क्याट्रिनाभन्दा अघि सो फिल्मका लागि प्रियंका चोपडालाई प्रस्ताव राखिएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
हाल ५४ वर्षीया एथ्लेटिक्स खेलाडी उषालाई भारत सरकारले २० वर्षको कम उमेरमै अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री पुरस्कारले सम्मानित गरेको थियो । उनको पूरा नाम पिलाबुल्लकन्डी थेक्केपराम्बिल उषा हो । उनलाई क्विन अफ इन्डियन ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ । निकै चुनौतीपूर्ण रोल भएकाले क्याट्रिनाले स्विकार्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्नेमा भने अन्योल छ ।
आइफेल टावरपछि हनिमुनमा गएका बर्षा र संजोगको स्विजरल्यान्डको हिउँमा यस्तो रोमान्स
काठमाडौँ-संजोग कोइराला र बर्षा राउत हनिमुन यात्रामा छन् । उनीहरुले हनिमुन मनाइरहेका रोमान्टिक तस्विर सार्वजनिक
काठमाडौँ-संजोग कोइराला र बर्षा राउत हनिमुन यात्रामा छन् । उनीहरुले हनिमुन मनाइरहेका रोमान्टिक तस्विर सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
युरोप यात्रा हनिमुन यात्रामा रहेका बर्षा र संजोग निकै रमाइलो गरिरहेका छन् ।सन्सा जोडीले स्विजरल्यान्डमा हिउँमा रमाइलो गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।
सार्वजनिक तस्बिरमा बर्षा र संजोग निकै खुसी छन् । यस अघि पेरिसको आइफेल टावरमा रमाइलो गरेका तस्विर सार्वजनिक गरेका थिए ।बर्षा अभिनित दालभात तरकारी यही शुक्रबार र जात्रै जात्रा फिल्म जेठ ३ गते प्रदर्शन हुँदैछ ।
नेपाल आइडलका अमितले ल्याए पुष्पन प्रधानको संगितमा पहिलो गीत ‘म त तिम्रै हुँ’ , हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौँ- नेपाल आइडल सिजन २ को उत्कृष्ट ५ सम्म पुग्न सफल अमित बरालले आफ्नो पहिलो
काठमाडौँ- नेपाल आइडल सिजन २ को उत्कृष्ट ५ सम्म पुग्न सफल अमित बरालले आफ्नो पहिलो गीत बजारमा ल्याएका छन् । पुष्पन प्रधानको शब्द तथा संगीत रहेको गीत ‘म त तिम्रै हुँ’ मा अमितले मोडलिङ्ग समेत गरेका छन् ।
मितलाई मोडल शाक्षी लम्सालले साथ दिएकी छन् ।
शिवराम श्रेष्ठले खिचेको भिडियोलाई मोहनराज अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन् भने सम्पादन लोकेश बज्राचार्यको छ । अमित नेपाल आइडलका प्रिय प्रतिस्पर्धी मध्येका एक हुन् ।
नेपाल आइडलको मञ्चमा पुष्पन प्रधानको पन्क्षी गाएपछि अमितको चर्चा सुरु भएको थियो ।पुष्पनसँगै आइडलमा प्रस्तुती दिएपछि उनको चौतर्फी चर्चा चुलिएको हो ।
तिमीलाई के भनौँका गायक युवराजको गीतमा प्रियंका कार्कीको दमदार अभिनय (भिडियो)
ओएस नेपाल / काठमाडौं । लोकप्रिय गायक युवराज चौलागाईको नयाँ गीत लटर पटरको भिडियो सार्वजनिक
ओएस नेपाल / काठमाडौं । लोकप्रिय गायक युवराज चौलागाईको नयाँ गीत लटर पटरको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्लेब्याक सिंगरको रुपमा चर्चा कमाइरहेका गायक चौलागाईको आफ्नै युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको गीतमा उनलाई स्वरमा अनुष्का पाठकले साथ दिएकी छिन् । राजेन्द्र थापाको शब्द सृजनामा दीपक शर्माले संगीत भरेको गीतमा उदयराज पौडेलको एरेन्ज रहेको छ । पछिल्लो पुस्ताका चर्चित निर्देशक गम्भिर विष्टको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोमा चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीको सशक्त अभिनय रहेको छ । जसमा प्रियंकालाई चर्चित मोडल तथा डान्सर सुनिल क्षेत्रीले साथ दिएका छन् ।
सुनिललाई प्रेम दिलाउन खोज्दा प्रियंकाको थप्पड समेत खाएका गायक चौलागाईको पनि भिडियोमा गज्जब अभिनय देख्न सकिन्छ । तिमीलाई के भनौँ, हारेँ हारेँ, तिम्रा डोला डोला, लगायतका लगायतका थुप्रै चर्चित गीतका गायक चौलागाई आफ्नो नयाँ भिडियो सार्वजनिक गरेसँगै निकै उत्साहित छन् । जसमा छायांकनको काम नवराज उप्रेतीले गरेका छन् भने सम्पादन नबिन निरौलाको रहेको छ ।
यि नायक र नायिकाको बिहे बलिउडकै महंगो, जसमा २ करोडको भारुको त औँठी मात्रै थियो, घुम्टोमा थियो सुनको धागो
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले अभिनेता रणवीर सिंहसँग विवाह गरेपछि दीपिकाले लगाएको औँठीको मूल्यबारे
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले अभिनेता रणवीर सिंहसँग विवाह गरेपछि दीपिकाले लगाएको औँठीको मूल्यबारे चर्चा चल्न थालेको छ । उनीहरुको विवाहको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका बेला औँठीको मूल्यलाई लिएर चर्चा भएको हो । इन्गेजमेन्टमा दीपिकाले लगाएको औँठीको मूल्यको चर्चा भएको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दीपिकाले लगाएको औंठीको मूल्य १।३ करोड देखि २।७ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको हो । साथै दीपिकाले लगाएको मंगलसुत्रको मूल्य २० लाख रुपैयाँ भएको बताइएको छ । उनले रणवीर सिंहका लागि झण्डै २० तोलाको सिक्री पनि किनेकी थिइन् ।
दीपिकाले ओढेको घुम्टीमा गोल्डेन कढाई गरेर ‘सदाः सौभाग्यवती भवः ।।’ लेखिएको थियो । कढाई गर्दा कुनै सामान्य धागोको प्रयोग नभई सुनको धागो प्रयोग गरिएको थियो । दीपिकाको लागि यो घुम्टी रणवीर सिंहको परिवारको तर्फबाट बनाइएको थियो ।
विश्वकै महंगो इन्गेजमेन्ट गरेकी यि सुन्दरीका प्रेमीले इन्गेजमेन्ट तोडेपछि मागे २२ करोडको इन्गेजमेन्ट औँठी फिर्ता
एजेन्सी । इन्गेजमेन्ट टुट्यो भने इन्गेजमेन्टको औँठी फिर्ता गर्नुपर्छ । यो कानुन अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा छ
एजेन्सी । इन्गेजमेन्ट टुट्यो भने इन्गेजमेन्टको औँठी फिर्ता गर्नुपर्छ । यो कानुन अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा छ । अमेरिकन टेलिभिजन स्टार पेरिस हिल्टनले हालै उनका प्रेमी क्रिस जिल्कासँग इन्गेजमेन्ट तोडेपछि उनले प्रेमीलाई इन्गेजमेन्टको औँठी फिर्ता दिनुपर्नेछ । इन्गेजमेन्ट तोडिएपछि क्रिसले इन्गेजमेन्टमा पेरिसलाई लगाइदिएको औँठी फिर्ता मागेका छन् ।
त्यो औँठीको मूल्य २ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात २२ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने सिमाचारमा उल्लेख छ । पेरिस हिल्टन र क्रिस जिल्काले ७ वर्षअघि क्रिसमसको एक पार्टीमा पहिलो पल्ट एकअर्कालाई भेटेका थिए । यो जोडीले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध २०१७ को फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेसँगै केही समय प्रेम र रोमान्सका कारण चर्चामा रहे ।
तर एकाएक यो जोडीको सम्बन्ध चिसिँदै गयो र अन्तत उनीहरुबिच इन्गेजमेन्ट तोडिने अवस्था आएको छ । क्रिसले २०१८ को सुरुवातमा पेरिसलाई २२ करोड मूल्य बराबरको औँठी लगाइदिएर इन्गेजमेन्ट गरेका थिए । साथै यसैवर्षको अगष्टमा यो जोडीले आफूहरु व्यस्त भएका कारण विवाहलाई केही समय पछाडि धकेलेको खबर सार्वजनिक गरेपनि अन्तत उनीहरु फेरी छुट्टीने पक्का पक्की भएको छ ।
अक्षयले रचे इतिहास !
मुम्बई – पछिल्लो समय अभिनेता अक्षय कुमार निकै चर्चामा आइरहेका छन् ।बिभिन्न कारणले चर्चामा आइरहेका
मुम्बई – पछिल्लो समय अभिनेता अक्षय कुमार निकै चर्चामा आइरहेका छन् ।बिभिन्न कारणले चर्चामा आइरहेका अभिनेता अक्षय कुमार यति बेला फरी भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट गरेपछी फेरी चर्चामा आएका छन् । उनले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ भेट गरेका थिए । उनले भेटमा नरेन्द्र मोदीको अन्र्तवार्ता गरेका छन् । उनले ले मादीलाई गैह्र राजनीतिक प्रश्न सोधेका थिए। अभिनेता अक्षयले प्रधानमन्त्री मोदीलाइ उनको ब्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका प्रश्न सोधे । अभिनेता अक्षय कुमारले सोधेका प्रश्नको मोदीले सबै जवाफ दिएका थिए ।
उक्त अन्र्तवार्ता अहिले सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।उक्त भाइरल भएको अन्र्तवार्ताका लागी अक्षय कुमारलाई नै किन चुनियो भन्ने बारे नयाँ कुरा खुलेको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार अक्षयले जनताकाबीचमा हिरोको छवि बनाएका कारण अक्षयलाइ अन्र्तवार्ताकालागि चुनिएको बताइएको छ ।
अन्र्तवार्ताका लागि सलमान र अमिर खानको नाम आएपनी अन्तिममा अक्षयलाई चयन गरिएको बताइएको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार सलमान खानले प्रधानमन्त्रीसँग क्याजुअल कुरा गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै अमिर खानले केही समय अगाडि देशको अवस्था देखेर पत्नी देश छोडेर बाहिर जान चाहेको बताएका थिए।
युवास्टार वरुणले प्रेमिका नताशासँग नोभेम्बरमा बिहे गर्दै
काठमाडौं – युवास्टार वरुण धवनले बुधबार (२४ अप्रिल) आफ्नो ३२औँ जन्मदिन मनाए । पछिल्लो समय
काठमाडौं – युवास्टार वरुण धवनले बुधबार (२४ अप्रिल) आफ्नो ३२औँ जन्मदिन मनाए । पछिल्लो समय फिल्ममै व्यस्त रहेका उनी अब बिहे गर्ने मनस्थितिमा पुगेको खबर भारतीय मिडियाले फैलाएका छन् । कमेडी फिल्म निर्देशक डेबिड धवनका छोरा वरुणले प्रेमिका नताशा दलालसँग पारिवारिक सहमतिमा बिहे गर्न लागेको चर्चा चलेको छ ।
खबरअनुसार वरुण र नताशाको परिवारले उनीहरूको बिहेका लागि यही वर्षको नोभेम्बरको कुनै दिन तय गर्न लागेको छ । पहिला वरुण र नताशाले सन् २०२० मा बिहे गर्ने योजना बनाएका थिए ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।तर, उनीहरूको परिवारले यही वर्ष नै बिहे गर्नुपर्ने अडान राखेकाले नोभेम्बरको साइत हेरिँदै छ ।
वरुण र नताशाले सिन्धी परम्पराअनुसार बिहे गर्नेछन् । उनीहरू लामो समयदेखि प्रेममा छन् । तर, कहिल्यै पनि आफूहरूको प्रेमबारे खुलेर बताउने गरेका छैनन् । वरुणकी आमा छोराको बिहे धुमधामसँग गर्न चाहन्छिन् । हाल स्ट्रिट डान्सर–३ फिल्मको सुटिङमा व्यस्त रहेको वरुण त्यसपछि आफ्ना बाबु डेबिडले निर्देशन गर्ने कुली नम्बर १ को रिमेकमा अभिनय गर्नेछन् ।
गायक विष्णु खत्रीको मन छुने गीत’बिचल्ली’ (भिडियो)
काठमाण्डौं – दोहोरी क्षेत्रमा चर्चा कमाउन सफल भएका चर्चीत लोकदोहोरी गायक विष्णु खत्रीको नयाँ गीत
काठमाण्डौं – दोहोरी क्षेत्रमा चर्चा कमाउन सफल भएका चर्चीत लोकदोहोरी गायक विष्णु खत्रीको नयाँ गीत बिचल्ली सार्वजनिक भएको छ। लामो समय पछि बिष्णुले निकै मर्म स्र्पसि गीत बजारमा ल्याका छन् । आफ्नै स्वर, शब्द र संगीतमा उक्त गीत बजारमा ल्याएका हुन्।
सामाजिक यथार्थता बोकेको ‘बिचल्ली’ गीतमा विष्णु खत्री र देवी घर्तिको निकै मिठो आवाजमा सजिएको गीत रहेको छ । वैदेशीक रोजगारमा जाने सयौ नेपाली युवाले भोग्नु परेको कहालीलाग्दो अवस्थालाई समेटेर गीत संगीतको माध्यमबाट उतार्ने जमर्को गरेका छन्।
सुजन शाहिको सम्पादनमा तयार भएको गीतलाई दिलिप रेग्मीले निर्देशन गरेका हुन्। मरुभूमि नारायणले छायांकन गरेको गीतमा दिलिप रेग्मी,साया भण्डारी,बिष्णु खत्री र प्रलाद सुबेदी अभिनय रहेको छ।
मलाइकासँग बिहे गर्ने विषयमा मुख फोरे अर्जुन कपूरले
काठमाडौं । अर्जुन कपुर र मलाइका अरोराबीच विवाहको खबर केही समय अगाडी निकै चर्किएको थियो
काठमाडौं । अर्जुन कपुर र मलाइका अरोराबीच विवाहको खबर केही समय अगाडी निकै चर्किएको थियो । अप्रिल १९ मा विवाह हुने भनेको यो जोडीको कारण बस विवाह हुन सकेन । पटक पटक विवाहको कुरा आएपछि हाँसोको पात्र बनेका यी जोडीले भित्रि कुरा मिडियाको सामु खोलेका छन् ।
अर्जुन कपुरले विवाह हल्ला मात्र भएको कुरा पुष्टि गरेका छन् । भर्खरै ३३ बर्षमात्रै पुगेको कारणले गर्दा विवाह गर्नको लागी योग्य नभएको र विवाहकको कुरा हल्ला मात्र भएपनि यसबाट आफु खुशी रहेको उनले बताए । केहि दिन अगाडी मलाइका अरोराले पनि यस बिषयलाई उठाएकी थिईन् ।
उनले पनि सबै कुरा हल्ला मात्र भएको जानकारी दिएकी छिन् । मलाइका ४५ बर्षकी भइन् । यि दुई बिचको उमेरको असमानताले विबाह हुन नसकेको होकी विबाह एउटा फण्डा मात्रै थियो ?
एक कार्यक्रममा गएकी शिल्पालाइ जब पोशाकले धोका दियो (भिडियो)
एजेन्सी – बलिउडमा कतिपय कलाकारहरु चर्चामा आउनका लागि विभिन्न गतिविधि गरेकै हुन्छन् । बलिउड क्षेत्रमा
एजेन्सी – बलिउडमा कतिपय कलाकारहरु चर्चामा आउनका लागि विभिन्न गतिविधि गरेकै हुन्छन् । बलिउड क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि कलाकारको जीवन निजी रहँदैन। उनिहरुको हरेक गतिविधिप्रति मिडियादेखि उनीहरुका फ्यानले फलो गरिरहेका हुन्छन्। कहिले काँही भने कलाकार आफ्नो पोशाकका कारण पनि लज्जित हुनु गरेका छन् ।
यस्तै भयो बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाई। केही दिन अगाडि एक कार्यक्रममा शिल्पालाई आफ्नो पहिरनले सारै धोका दिएको थियो । उनको ध्यान कार्यक्रममा भन्दा पनि आफैले लगाएको पहिरनमा कपडा मिलाउनमा केन्द्रित भयो। यो क्रममा शिल्पाले सेता आउटफिट लगाएकी त्यो पोससाकमा उनि निकै सुन्दर देखिएकी थिइन ।
हनिुमनले रोक्यो बर्षाको दाल भात तरकारी प्रमोशन यात्रा, जात्रै जात्राको प्रमोशनका लागि भने नेपाल आँउने
सिनेमा जात्रै जात्राको छायांकन सकेर अभिनेत्री बर्षा राउत र अभिनेता संजोग कोइराला यूरोप उडेका छन्
सिनेमा जात्रै जात्राको छायांकन सकेर अभिनेत्री बर्षा राउत र अभिनेता संजोग कोइराला यूरोप उडेका छन् ।फ्रान्समा पगएर वर्षर संजोगले हनिमुन मनाइरहेका छन् । उनीहरुले इटालीबाट सुरु गरेको हनिमुन ट्रिप फ्रान्स पुगेको छ ।
, सिनेमाको छायांकनमा बर्षा व्यस्त हुनु, संजोग व्यापारिक काममा व्यस्त हुनुले उनीहरुले हनिमुनका लागि समय निकाल्न पाएका थिएनन् । बर्षा हनिमुन यात्रामा निस्किएपछि उनको फ्रेस रिलिज सिनेमा दाल भात तरकारीको प्रमोशन यात्रा भने रोकिएको छ ।
फागूणमा बिहे गरेका यो जोडी बिहेपछि पनि व्यस्त भए ।उनी, सिनेमा जात्रै जात्राको प्रमोशनका लागि भने नेपाल आइपुग्ने भएका छन् । फिल्म दाल भात तरकारीमा आँचल शर्मा पुस्पल शर्मा निरुता सिंह लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
साकाहारी भोजनमा प्राय पनिरको पारीकार बन्ने गर्दछ । यसले खानाको सोभा र स्वाद मात्र बढाउने